निन्द्रामा समस्या छ भने वास्तुमा ध्यान दिनुस्, यस्ता छन् ७ टिप्स Weekly Nepal
निन्द्रामा समस्या छ भने वास्तुमा ध्यान दिनुस्, यस्ता छन् ७ टिप्स
काठमाडौं । यदि तपाईलाई निन्द्रामा समस्या छ भने एकपटक वास्तुतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । वास्तु दोषको कारण निन्द्रा डिस्टर्व हुने गर्दछ । घरको वास्तुले हाम्रो दैनिक जिवनमा गहिरो प्रभाव पारेको हुन्छ । हामीले सामान्यतया यस्ता कुरालाई वेवास्ता गर्ने गर्छौ र समस्याको समाधानका लागी अरु तिरै भौतारिने गर्छौ । थाहा पाउनुस् वास्तुशास्त्रले निद्रामा कस्तो असर गर्छ ।
१. कैयौ अवस्थामा हामीले आफु अनुकुल प्रयोग गर्न सजिलो होस् भनेर सुत्ने कोठामा नै फ्रिज, ग्यास जस्ता सामानहरु राख्ने गर्दछौ । यस्ता वस्तुलाई कोठाबाहिर राखेमा राम्रो निन्द्रा पर्छ । (वैज्ञानिक कारण, सुत्ने कोठामा विद्युतिय तथा चुम्बकिए वस्तुहरु राख्दा स्वास्थ्यमा प्रभाव पर्छ)
२. कतिपय व्यक्तिले लापरवाही गर्दै आफु सुत्ने खटिया घरको जुनसुकै दिशामा राख्ने गर्दछन् । जसको कारण रातको समयमा राम्रो निद्रा लाग्दैन । उत्तर दिशामा टाउको र ढोकातर्फ खुट्टा राखेर सुतेमा वास्तुदोष लाग्छ । (वैज्ञानिक कारण: पृथ्वीको चुम्बकिय गुणको कारण उत्तर-दक्षिण शरिर पारेर सुत्नु हुँदैन)
३. सुत्ने कोठाको रङ आफु अनुकुल हुनुपर्छ । सुत्ने कोठाको रंग आफुलाई मनपर्ने भयो भने मिठो निद्रा लाग्छ ।
४. सुत्ने कोठा खुला तथा सामान्य हुनुपर्छ । कोठा धेरै गन्जागोल राख्नु हुदैन ।
५. घरको डिजाइन गर्दा कोठामा चार कुनाको सट्टा पाच कुना राखेमा त्यसतो कोठामा सुत्दा समस्या हुन्छ ।
६. रातको समयमा पानी पिउने वानी छ भने, पानीको बोतल तथा गिलास बेड नजिक नराख्नुस् । यसले सुत्दा बेचैन महसुस हुन्छ ।
७. सुत्दा पुर्व दिशा तर्फ सिरानी राखिनु पर्छ । साथै कोठाको झ्याल ढोका आवाज नआउने हुनुपर्छ ।